२०७७ असोज ७ बुधबार ०४:०१:००
१. शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा ९ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीका लागि तयार पारेको हो यो पुस्तक जसको नाम छ– नेपालको भूभाग र सीमासम्बन्धी स्वाध्याय सामग्री ।
२. लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको ४६० दशमलव २८ वर्गकिलोमिटर भूभाग थपिएर नेपालको कुल क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार ६४१ दशमलव २८ वर्गकिलोमिटर पुगेको विवरण किताबमा छ ।
३. भारतसँग कूटनीतिक वार्तामा असर पर्न सक्छ भन्दै अहिले किताब छाप्न हतार हुने मूल्यांकन सरकारभित्रै छ । तर, संसद्ले सर्वसम्मत पारित गरेको नक्सामा सरकारी निकायबीचमा अनौठो विवाद भइरहेको छ ।
४. ‘किताब वितरण रोक्नुस् भनेर प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मै भन्नुभयो, अब परराष्ट्र, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसहित छलफल गर्छौँ । अन्तरमन्त्रालय छलफल गरेर स्पष्ट पार्छौँ,’ मंगलबार शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पत्रकारहरूसँग भने ।
५. ५ जेठमा सरकारले निर्णय गरेअनुसार भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले ७ जेठमा नक्सा जारी गरेकी थिइन् । ३१ जेठमा प्रतिनिधिसभा र ४ असारमा राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको थियो । तर, थपिएको भूमि कति हो भनेर सरकारले अहिलेसम्म खुलाएको छैन ।
लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर तयार पारिएको नक्सा समावेश भएको पुस्तक वितरणमा सरकारबाटै अवरोध सिर्जना भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा नौदेखि १२ सम्मका विद्यार्थीका लागि यो प्रकाशन गरेको छ, तर यो पुस्तक तत्काल वितरण नगर्नू भनेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निर्देशन दिएका छन् ।
त्यसो त मन्त्री पोखेरलले पुस्तक छपाइअघि सुझाबका लागि भन्दै प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीसहित सचिवालयका सबै सदस्यलाई समेत पाण्डुलिपि उपलब्ध गराएका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीकै सल्लाहमा यो पुस्तक तयार भएको छ । सुझाब भए दिनुहोला,’ मन्त्री पोखरेलले नेकपा सचिवालय सदस्यलाई पाण्डुलिपि दिँदै भनेका थिए । ‘नेपालको संसद्ले पारित गरेको नयाँ नक्सा नेपालका सबै बालबालिकाले पढ्न पाउनु धेरै राम्रो काम हो, यसलाई अगाडि बढाउनु भन्दै सबै नेताले मन्त्रीलाई शुभकामना पनि दिएका थिए,’ नेकपाका एक नेताले भने । तर, पुस्तक छापिइसकेपछि वितरणमा प्रधानमन्त्री ओलीले नै रोक लगाएपछि अनौठो मानिएको छ ।
संविधानमा भएको नक्सा विद्यालयको किताबमा किन नहुने ? त्यसमा सम्झौता किन ? जब कि यो पुस्तक कुनै स्वतन्त्र प्रकाशन गृहले होइन, नेपाल सरकारकै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेको हो । नेकपा स्थायी कमिटीका एक नेता भन्छन्, ‘राष्ट्रवाद भनेको हाम्रोमा सत्ता टिकाउने खेल हो । पार्टीभित्रैबाट बढेको दबाबले संकटमा परेको वेला नक्साको राजनीति भयो, संविधान संशोधनको जस लिने प्रतिस्पर्धा पनि चल्यो । अब सरकार सुरक्षित छ भनेपछि विद्यालयको किताबमा पनि नक्सा राख्ने कि नराख्ने गाह्रो भएको छ, यो हाम्रो देशको दुर्भाग्य हो ।’
अहिलेसम्म जे भयो भयो, अब यसभन्दा अगाडि बढ्दिनँ भनेर भारतलाई आश्वस्त पार्न प्रधानमन्त्रीले नक्साको किताब रोकेको नेकपाकै नेताहरूको भनाइ छ । ‘राजनीति गर्नेले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको छ । तर, देशको संविधानमा भएको नक्सा रोक्नु अन्यथा हो, राष्ट्रियतामाथि धोका हो । पार्टीमा यो विषयमा अवश्य छलफल हुन्छ,’ उनले भने ।
विपक्षी कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओली नक्सा प्रकरणमा संवेदनशील नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
‘जनस्तर र संसद्मा समेत पर्याप्त बहस भएर संविधानमा समावेश भइसकेको नक्सा विद्यालयको पुस्तकमा समेट्न केको आपत्ति ?’ कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भने, ‘नक्सा जारी गर्नेले अहिले पुस्तक वितरण नगर्नु–नछाप्नु भनेर आदेश दिनुले प्रधानमन्त्री राष्ट्रियताप्रति संवेदनशील हुनुहुन्न भन्ने देखाउँछ । प्रधानमन्त्रीले यस्तै निर्देशन दिनुभएको हो भने नक्सा पास देखावटी रूपमा मात्रै गरिएको रहेछ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । यसो गर्नु देशमाथिको धोका हो ।’
नयाँ नक्सासहितको पुस्तक वितरण रोक्नुको कारण प्रधानमन्त्रीले देशलाई बताउनुपर्ने जनता समाजवादी पार्टीका नेता महेन्द्र राय यादवले माग गरे । ‘नक्सा देशको भूमिसँग जोडिएको विषय हो । यो आफैँमा संवेदनशील हुन्छ । यसलाई पहिले नै सोचविचार गरेर अघि बढ्नुपथ्र्यो । नक्सा संसद्बाट पास भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले अहिले पुस्तक वितरण किन रोकेको हो ? रोक्नुको कारण देशलाई बताउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो राजनीतिक–कूटनीतिक र दुई देशबीचको समस्या हो । यसमा हतारभन्दा व्यावहारिक समाधान निकाल्नुपर्छ । भारतसँगको वार्ताले नै यो विषयलाई टुंग्याउने हो । पठनपाठनमा जानुपूर्व विषय टुंगियो भने अध्ययन गर्नेलाई सहजता हुन्छ भनेर अहिले रोकिएको पनि हुन सक्छ । तर, प्रधानमन्त्रीले यसमा स्पष्ट पार्नुपर्छ ।’
राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेलले भविष्यमा वार्ताका लागि बाटो बन्द नहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीले पुस्तक वितरण रोकेको हुन सक्ने सुनाए । ‘नयाँ नक्साअनुसारको भूमि हामीले हाम्रो भन्यौँ, भारतले आफ्नो भनिरहेको छ । यसमा विवाद देखिन्छ । कूटनीतिक तहमा वार्ता गरेर यो विषय मिलाउनुपर्ने अवस्था छ । वार्ता नै नभई पठनपाठनकै विषय बनाउँदा भोलि कठिनाइ हुन सक्छ भनेर अहिले पुस्तक रोक भनेको हुन सक्छ । नक्सा प्रकाशित गर्दा दिनुपर्ने सन्देश दिइसकिएको छ,’ पोखरेलले भने, ‘पुस्तकमा उल्लेख भएका कतिपय विषय कूटनीतिक मर्यादाविपरीतका छन् भन्ने पनि सुनिएको छ । वार्ता भारतसँगै गर्नुपर्ने भएकाले भोलिका दिनमा कूटनीतिक तहमा अप्ठ्यारो नआओस् भनेर प्रधानमन्त्रीले यस्तो निर्देशन दिएको हुन सक्छ । कूटनीतिक अर्थ हुन्छ भन्ने हिसाबले पनि रोकेको हुन सक्छ । तर, नक्साको जे काम गर्‍यौँ, पठनपाठन पनि त्यही किसिमले गर्ने नीति हुनुपर्छ ।’
सरकारले सबै राजनीतिक दलहरूबीच सहमति कायम गर्दै ५ जेठमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नेपालको वास्तविक सीमासहितको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा प्रकाशित गरेको थियो । नक्सालाई नेपालको निसाना छापमा समेट्ने गरी संघीय संसद्को दुवै सदनबाट नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक सर्वसम्मत पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो ।
#लिम्पियाधुरा # पुस्तक
पूर्वप्रधानन्यायाधीश रायमाझीको पुस्तक ‘न्यायपालिकामा चार दशक’
पूर्वमन्त्री पाण्डेकाे ‘क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति’ पुस्तक बजारमा